Qarax Ka Dhacay Maqaaxi Ku Taalla Degmada Deyniile Oo Dhimasho Farabadan * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax Ka Dhacay Maqaaxi Ku Taalla Degmada Deyniile Oo Dhimasho Farabadan
Muqdisho, Mareeg.com: Qarax Miino oo ka dhacay maqaaxi ku taalla degmada Deyniile, gaar ahaan xaafadda Bangala ee dhacda kazoo horjeedka Kulliyadii Jaalle Siyaad ee wadada Warshadaha ayaa sababay dhimasho badan iyo dhawaac.
Qaraxa ayaa k adhacay maqaayad ay wax ka cuni jireen ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey iney ku dhinteen 7 qof oo ay ku jiraan labo dumar ah. Dadka geeriyooday waxaa ka mid ah xubno askar ah.
Guddoomiyaha degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, Xiirey Muxyadiin Cumar ayaa sheegay in qaraxan u ahaa miinada dhulka lagu aaaso oo rimuutka laga hago.
Guddoomiyaha ayaa sheegay inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo khasaaraha uu sabaey qaraxaasi, isagoo tilmaamay in ilaa hadda ay war hayaan 7 dhimasho ah.
“Qaraxa waxaa ku dhintay todobo qof oo maqaaxi ku sugnaa, waxaa maalmahan tuhumeynay in degmada ay soo galeen kooxo nabad diid ah” ayuu gudoomiye Xiirey.
Deegaanka qaraxu ka dhacay ayaa aad loo degay wixii ka dambeeyey markii Alshabaab laga saaray Muqdisho, waxaana dadka degan u badan yihiin barakacayaal.
Madaxda Dalalka IGAD Oo Nairobi Uga Shiraya Colaadda Koonfurta Sudan